कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक – Metro Today Weekly
कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक
प्रकाशित : ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को यही कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । नेकपाले बैठक आयोजना गर्दा अहिले कोभिड –१९ बाट दैनिक दुई हजार मानिस काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित छन् । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक होला त ?
केन्द्रीय कमिटी सदस्य ४४७ जनासहित सुरक्षाफौज र बैठक व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा तीन हजार जनशक्ति आवश्यक पर्न जान्छ । मुलुकभरि एक लाख ३२ हजार २४६ र काठमाडौँमा मात्र ५५ हजार ३८७ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । “बैठक सरेको छैन । शीर्ष नेताहरु भर्चुअल बैठक गर्ने कि भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ”, उनले भने, “स्थिति हेरेर बैठक बस्ने, नबस्ने टुङ्गो लाग्छ ।” बैठक बस्ने निश्चित नभएको र स्थलको पनि यकिन गरिएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक गत माघमामा राष्ट्रियसभागृहमा बसेको थियो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले बैठकबारे औपचारिक जानकारी अझै आइनसकेको बताए । उनले कोभिडका कारणले बैठक के हुन्छ भन्न नसकिने जनाउँदै बैठकको देखिने गरी तयारीसमेत नभएको बताए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सरेको जानकारी अझै आइनसकेकाले बैठक हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाए ।
एमालेमा पुनः एकताको पहल ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३
पत्रकार महासंघको अध्यक्ष अझै आचार्य ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३
सञ्चारमा माओवादी एजेण्डा घुसाउन को सक्रिय ? ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३
पत्रकार महासंघकी माओवादी केन्द्र ? खोप र राहत सहयोग समेत चलखेल ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सात मन्त्री ? ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:५३